မိနျးမကိုယျမှ ဂတျဈထှကျခွငျး - OnDoctor
By Ei Cho Dr.	 On Aug 9, 2018
ရှူး လို့အသံထွက်နေသောအခါ မိမိကိုယ်ကို မိမိအလန့်တကြားထိတ်လန့်မိပါတယ်။လေလည်နေသောအသံကဲ့သို့ မိန်းမကိုယ်မှထွက်သောအခါ ဇဝေဇန အဖြေရှာနေမိပါတယ်။ဒါက ပုံမှန်လား ? ပြင်းထန်သောရောဂါတခုရဲ့ လက္ခဏာလား စိုးရိမ်စိတ်လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။မိန်းမကိုယ်မှ ဂတ်စ် (ဝါ)လေ ထွက်ခြင်းအကြောင်းရင်းခံကို သိချင်သူ အမျိုးသမီးအများအပြား OnDoctor ပရိသတ်တွေအတွက် ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
(1)လေထွက်သောအကြောင်းရင်းများစွာ ရှိသည့်အနက် အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းနှင့်ဖြစ်လေ့ရှိတတ်သောအကြောင်းရင်းကိုသေချာစွာခွဲခြားတတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် အဖြစ်များသောလေထွက်သောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလိင်တံမိန်းမကိုယ်ထဲဝင်ရာတွင်လေပါခိုအောင်းပြီး ကြွက်သားများကျုံ့ဆန့်သောအခါ လေထွက်ပြီး လေလည်သံထွက်ကာ လေပူဖောင်းထွက်သကဲ့သို့ခံစားရတတ်ပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်သောဆက်ဆံခြင်း oral sexကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယိ။
မိန်းမကိုယ်သည် မူမမှန်အပေါက်ဖြစ်ကာ မိန်းမကိုယ်နှင့်အခြားသောအတွင်းကလီစာနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မဆိုင်ဘဲ ပုံမှန်လေထွက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်မိန်းမကိုယ်အပေါက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဆီးအိမ်နှင့်ဆက်စပ်နေလား အူမကြီးနှင့်ဆက်စပ်နေလားစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်နှင့်ဆီးပြွန်ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။တခါတရံ မိန်းမကိုယ်နှင့်အူမကြီးဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။မွေးရာပါမဟုတါဘဲ ကလေးမွေးစဉ် ပြသနာဖြစ်က အူမကြီးနှင့်ဆက်သွားတတ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်မူ ။ကင်ဆာ။ရောဂါတွေကြောင့်လည်း အပေါက်ဖြစ်ကာ မိန်းမကိုယ်လေထွက်တတ်ပါတယ်။
မှန်ပြောင်းကြည့်ရူခြင်းကြောင့် လေများပြန်နှံ့ကာ မိန်းမကိုယ်လေထွက်ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။
မိန်းမကိုယ်သည် အခြားသောအင်္ဂါတစ်ုနှင့် ဆက်သွယ်အပေါက်ဖြစ်နေပါက မိန်ူမကိုယ်လေထွက်ခြင်းအပြင်အခြားသောလက္ခဏာများလည်းခံစားရတတ်ပါတယ်။
လေထွက်ခြင်းကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းအထွေအထူးမရှိပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သဘာဝအားဖြင့်အသံထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။Kegel လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တင်ပါးဆုံကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ပေးပါ။ဆိုးရွားပါက မိန်းမကိုယ်အပေါက်ကျဉ်းစေရန်ခွဲစိတ်မူခံယူပါ။
မိန်းမကိုယ်လေထွက်ခြင်းသည်ရောဂါအကြောင်းရင်းမရှိပါက ကုသရန်မလိုပါ။သို့သော်မိန်းမကိုယ်သည် အခြားသောအင်္ဂါနှင့်ဆက်စပ်အပေါက်ဖြစ်နေပါက သေချာခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်ပါတယ်။မကုသပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများခံစားရနိုင်ချေရှိပါတယ်။
ရှူး လို့အသံထှကျနသေောအခါ မိမိကိုယျကို မိမိအလနျ့တကွားထိတျလနျ့မိပါတယျ။လလေညျနသေောအသံကဲ့သို့ မိနျးမကိုယျမှထှကျသောအခါ ဇဝဇေန အဖွရှောနမေိပါတယျ။ဒါက ပုံမှနျလား ? ပွငျးထနျသောရောဂါတခုရဲ့ လက်ခဏာလား စိုးရိမျစိတျလညျးရှိနတေတျပါတယျ။မိနျးမကိုယျမှ ဂတျဈ (ဝါ)လေ ထှကျခွငျးအကွောငျးရငျးခံကို သိခငျြသူ အမြိုးသမီးအမြားအပွား OnDoctor ပရိသတျတှအေတှကျ ရေးပွလိုကျပါတယျ။
(1)လထှေကျသောအကွောငျးရငျးမြားစှာ ရှိသညျ့အနကျ အရေးကွီးသောအကွောငျးရငျးနှငျ့ဖွဈလရှေိ့တတျသောအကွောငျးရငျးကိုသခြောစှာခှဲခွားတတျရနျလိုအပျပါတယျ။
လိငျဆကျဆံခွငျးသညျ အဖွဈမြားသောလထှေကျသောအကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။အမြိုးသားလိငျတံမိနျးမကိုယျထဲဝငျရာတှငျလပေါခိုအောငျးပွီး ကွှကျသားမြားကြုံ့ဆနျ့သောအခါ လထှေကျပွီး လလေညျသံထှကျကာ လပေူဖောငျးထှကျသကဲ့သို့ခံစားရတတျပါတယျ။ပုံမှနျမဟုတျသောဆကျဆံခွငျး oral sexကွောငျ့လညျးဖွဈတတျပါတယိ။
မိနျးမကိုယျသညျ မူမမှနျအပေါကျဖွဈကာ မိနျးမကိုယျနှငျ့အခွားသောအတှငျးကလီစာနှငျ့ဆကျစပျခွငျးကွောငျ့ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။လိငျဆကျဆံခွငျးနှငျ့မဆိုငျဘဲ ပုံမှနျလထှေကျနခွေငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ပုံစံမြိုးစုံဖွငျ့မိနျးမကိုယျအပေါကျဖွဈနတေတျပါတယျ။ဆီးအိမျနှငျ့ဆကျစပျနလေား အူမကွီးနှငျ့ဆကျစပျနလေားစသညျဖွငျ့အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။
မိနျးမကိုယျနှငျ့ဆီးပွှနျဆကျစပျနတေတျတယျ။တခါတရံ မိနျးမကိုယျနှငျ့အူမကွီးဆကျစပျနတေတျပါတယျ။မှေးရာပါမဟုတါဘဲ ကလေးမှေးစဉျ ပွသနာဖွဈက အူမကွီးနှငျ့ဆကျသှားတတျပါတယျ။ခှဲစိတျမူ ။ကငျဆာ။ရောဂါတှကွေောငျ့လညျး အပေါကျဖွဈကာ မိနျးမကိုယျလထှေကျတတျပါတယျ။
မိနျးမကိုယျသညျ အခွားသောအင်ျဂါတဈုနှငျ့ ဆကျသှယျအပေါကျဖွဈနပေါက မိနျူမကိုယျလထှေကျခွငျးအပွငျအခွားသောလက်ခဏာမြားလညျးခံစားရတတျပါတယျ။
လထှေကျခွငျးကာကှယျရနျ နညျးလမျးအထှအေထူးမရှိပါ။ပုံမှနျအားဖွငျ့လိငျဆကျဆံခွငျးကွောငျ့သဘာဝအားဖွငျ့အသံထှကျခွငျးဖွဈပါတယျ။Kegel လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ တငျပါးဆုံကွှကျသားမြားကိုလကေ့ငျြ့ပေးပါ။ဆိုးရှားပါက မိနျးမကိုယျအပေါကျကဉျြးစရေနျခှဲစိတျမူခံယူပါ။
မိနျးမကိုယျလထှေကျခွငျးသညျရောဂါအကွောငျးရငျးမရှိပါက ကုသရနျမလိုပါ။သို့သျောမိနျးမကိုယျသညျ အခွားသောအင်ျဂါနှငျ့ဆကျစပျအပေါကျဖွဈနပေါက သခြောခှဲစိတျကုသရနျလိုအပျပါတယျ။မကုသပါက နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြားခံစားရနိုငျခရြှေိပါတယျ။